Aditya Arytano na ahoana no nahatanteraka ny minecraft tao amin'ny instagram | Famoronana an-tserasera
Aditya Aryanto na ahoana no nahatanteraka ny minecraft
Jose Angel | | mpanakanto, General
Aditya dia zazalahy mizaka ny zom-pirenen'i Indonezia izay nitondra ny mason'ny haino aman-jery ho fampisehoana an-tsary ny biby. Ary ny tena izy dia, Minecraft ny lalao goba malaza indrindra amin'izao androntsika izao dia misy fiantraikany mivantana amin'ny sangan'asany.
Mamorona biby isan-karazany, manomboka amin'ny saka ka hatramin'ny trondro ary biby lehibe hafa toa ny tigra amin'ny toerana voajanahariny indrindra. Mazava ho azy, toy ny hoe cubes. Ary izany ve raha mbola tsy azonao an-tsaina ny zavatra resahintsika, sary iray no hahatonga azy ireo hahita izay lazaiko tsara kokoa.
Araka ny nambarany ihany, ny sariny dia avy amina banky sary toa ny Unsplash -ny efa fantatsika tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Creativos-. Na koa PixaBay ho an'ireo izay te hahalala azy.
1 Ny fanaovana izany amin'ny fahafinaretana dia tsara kokoa hatrany
2 Ireo tambajotranao
Ny fanaovana izany amin'ny fahafinaretana dia tsara kokoa hatrany
Na eo aza ny zava-misy fa niteraka fanantenana be i Aditya, tsy izany no fialan-tsiny tsy nampianarina ny mpanaraka azy ny fahitany an-tsaina izany. Ary io dia ao amin'ny lahatsorany manokana dia miresaka momba ny fomba nahatongavany tany sy ny antony namoahany izany izy.
Saingy tsy mijanona eo izy io, mampiharihary koa ny hafetseny hamoronana sary, raha sanatria misy mahatsapa ho mahavita azy. Amin'ny fomba tsotra dia raiso ny sary tany am-boalohany ary mandehana amin'ny Photoshop. Amin'ny Mac ampiasainao: Cmd + J ary amin'ny Windows: Ctrl + J; mamorona sosona misaraka ary manitsy afaka miverina amin'ny tena izy. Raha vantany vao samy manana sosona ianao, mankanesa any amin'ny Filter> Liquify.
Ny tamba-jotra lehibe amin'ny fampisehoana ny asany dia tsy iza fa ny Instagram. Eto ianao dia afaka mahita ny sanganasany rehetra ary manamarina ny fivoarany ho mpanakanto vaovao. Heveriko fa ilay Creative no hita tamin'ity taona ity ary mendrika ny harahina, farafaharatsiny mba tsy ho azontsika atao fihomehezana izany.
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny instagram: Aditya
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Aditya Aryanto na ahoana no nahatanteraka ny minecraft
Masquespacio dia nanamboatra endrika ny studio azy manokana
Loharano vitsivitsy ho an'ny photoshop maimaim-poana